Otu esi egbochi oria na Coronavirus
Novel Coronavirus 2019, Healthtù Ahụ Ike officiallywa kpọrọ ya 2019-NCOV. na Jenụwarị 12, 2020. Coronaviruses bụ nnukwu ezinụlọ nke nje virus a maara na-akpata oyi na ọrịa ndị ka njọ dịka Middle East Respiratory syndrome (MERS) na nnukwu ọrịa iku ume (SARS). Akwụkwọ akụkọ ...
Kedu ihe na ịkpụzi uwe mwepu iche ọgwụ?
Ọrịa ntiwapụ nke ọrịa emeela ka ezughị ezu ọgwụ, ndị dọkịta ejirila akwa mmiri ozuzo polypropylene. Uwe ndị a na-acha odo odo, na-acha ọcha, na-acha anụnụ anụnụ, na nke gbara ọchịchịrị, ndị uwe ha na-ekewapụ onwe ha iche, na uwe elu ịwa ahụ nwere ụkpụrụ ha kwekọrọ? Ọ bụ otu ihe ahụ? N'okpuru ebe m na-agbalị ịtụle ihe ndị a m ...
Covid-19 oria ojoo: Ebee ka uwa coronavirus zuru ebe nile?
Coronavirus na-aga n'ihu na mgbasa ya n'ofe ụwa, na 31 nde ekwenyela na ikpe na 188 mba na ọnụ ọgụgụ ọnwụ na-eru nso otu nde. Ọnwa isii ka Organizationtù Ahụ Ike Worldwa (WHO) kwupụtara na ọ bụ ọrịa na-efe efe, nje a na-arịwanye elu n'ọtụtụ mba na ụfọdụ ndị yiri ka ha ...
Ọnwụ Coronavirus na-esi isi 'dị iche na oyi na flu'
Enweghi isi nke nwere ike iso coronavirus dị iche na nke dị iche na nke onye nwere ajọ oyi ma ọ bụ flu na-ekwu, ndị na-eme nchọpụta Europe bụ ndị mụọla ahụmahụ nke ndị ọrịa. Mgbe ndị ọrịa Covid-19 nwere isi isi, ọ na-adị na mberede ma dị njọ. Ha na-emekarị don ...